37 sheybaar oo ah dibloomooyin iyo shahaadooyin gabi ahaanba bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Khayraadka, habyaalada, Tababarada
Waxaan kula soo noqoneynaa taxaneyaal arrimo bilaash ah oo leh Ujeedada loo dejiyay dibloomooyinkaas oo badanaa la bixiyo dhamaadka koorso taasina waxay badanaa cadeysaa heerka daraasadaha ee la soo gabagabeeyay. Habka garaaf ahaan loo muujiyo isagoo waqti wakhti qaatay ku qaatay jimicsi maaddo gaar ah si loo helo aasaas ku filan oo lagu gaari karo xirfad si ka wanaagsan.
Sidaa darteed, waxaan kula wadaagi doonnaa 35 sheybaar oo bilaash ah dhammaan noocyada dibloomooyinka, oo aad ka heli karto tiro wanaagsan oo kala duwanaansho ah si aad u hesho midka ugu habboon hawsha su'aasha. The waxaa jira iskuulka, akadeemiyada ama xitaa qaar ka mid ah tartamadaas kuwaas oo lagu fuliyo barkadaha dabaasha si ay carruurta yaryar ee guriga jooga ugu farxaan oo u madadaaliyaan. Waxaan sidoo kale ku soo darnay casharro aan ku sharxeyno, tallaabo tallaabo, sida loo abuuro diblooma PowerPoint.
1 Xulista tusaalooyinka dibloomada
1.1 Shahaadada qadarinta ee qaabka guridda
1.2 Shahaadada caadiga ah ee guridda dahabka ah
1.3 Dibloomada guridda oo leh qaab qurxin
1.4 Shahaadada raaxada oo leh faahfaahin dahab ah
1.5 Shahaadada guusha
1.6 Shahaadada cajiibka ah ee mahadnaqa leh qaababka joomatari midabeed
1.7 Naqshadaynta shahaadiga ah
1.8 Shahaadada laba geesoodka cagaaran ee shaxanka guusha
1.9 Shahaadada raaxada
1.10 Shahaadada qadarinta ee saddexagalka cas
1.11 Shahaadada guusha midab buuxa
1.12 Dibloomada oo leh qaab caadi ah
1.13 Midabada shaabad diblooma ee midabada leh
1.14 Shahaadada lagu sharraxay qaababka buluugga ah iyo xargaha dahabiga ah
1.15 Sawir gacmeedka asalka ilmaha
1.16 Mawduuc diblomaasiyadeed oo dhalaalaya
1.17 Soo koobida khadadka shahaadada
1.18 Shahaadada Dibloomada Kuleejka
1.19 Asalka buugaagta ay kujiraan diblooma iyo turubka
1.20 Dibloomada xarrago leh oo shaabadaysan
1.21 Shahaado laba geesood ah oo casaan ah
1.22 Template shahaado qurxinta
1.23 Diblooma qurux badan oo leh faahfaahin qurxan
1.24 Shahaadada leh qaabab joomatari buluug ah
1.25 Naqshadeynta shahaadada casriga ah oo leh qaabab joomatari casaan iyo madow ah
1.26 Dibloomada wanaagsan ee carruurta
1.27 Dibloomada shaashadda oo leh xarfaha midabbo leh
1.28 Wiil diblooma ah oo leh caruur qosol badan
1.29 Shahaadada qalin-jabinta oo leh saddex-xagal midab leh
1.30 Shahaadada leh qaab dahab ah oo dahab ah
1.31 Template Shahaadada Cumppled
1.32 Diblooma qurux badan oo leh qaab qurxin
1.33 Shahaadada casriga ah
1.34 Shahaadada dibloomada guridda
1.35 Dibloomada qurxinta ee mudnaanta leh qaabka caadiga ah
2 Halka laga sameeyo dibloomooyin bilaash ah
2.2 La ciyaar isku-darka qoraalka iyo kala sarreynta qoraalka
2.3 Waad saxiixi kartaa adigoon barnaamijka ka bixin
3 Sida loo sameeyo diblooma diplomaasiyadeed
3.3 1,2,3 Shahaadooyin
Xulista tusaalooyinka dibloomada
Shahaadada qadarinta ee qaabka guridda
Este shahaadada qaabka guridda ee qadarinta Waa ikhtiyaar caadi ah oo aad u qurux badan, diblooma sax ah oo lagu xaqiijinayo arrimaha culus iyo kuwa rasmiga ah.
Shahaadada caadiga ah ee guridda dahabka ah
Ikhtiyaar kale oo casri ah oo casri ah, ayaa shahaadada dahabka guridda dahabka ah Waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad raadineyso diblooma u gudbisa xarrago iyo gaar ahaaneed.
Dibloomada guridda oo leh qaab qurxin
Haddii aadan ahayn dahab badan iyo codad dhalaalaya halkan waxaad ku haysataa bedel, a shahaadada guridda oo leh qaab qurxin midab buluug ah, oo isku dhafan oo isugu jira qoraal iyo nooc xarfaha ah, oo lagu xardhay xarrago.
Shahaadada raaxada oo leh faahfaahin dahab ah
Este shahaadada oo leh faahfaahin dahab ah Waa matalaadda raaxada, naqshad caadi ah laakiin leh taabasho casri ah. Tones beige iyo isku darka xiisaha badan ee serif iyo noocyada sans-serif.
Este shahaadada aqoonsiga guusha Waa mid ka mid ah xulashooyinka rasmiga ah ee ururinta, xarfaha xarafka cas waxay ka soo horjeedaan beige iyo codadka ceeriin ee naqshadeynta oo siineysa taabashada farqiga.
Shahaadada cajiibka ah ee mahadnaqa leh qaababka joomatari midabeed
Este shahaado ku saleysan qaababka joomatari waa ikhtiyaar dhalinyaro ah oo casri ah. Adeegsiga midabka iyo nooca cufan ee nooca-saran-serif ah oo ku fadhiya meesha ugu weyn waxay siinayaan muuqaal aad u casri ah.
Naqshadaynta shahaadiga ah
Kuwa kale diblooma xarrago leh, oo ka fudud kuwii hore. Dahabka ayaa ah midabka ugufiican ee lagu siinayo taabashada la safeeyey oo lakala garto naqshadeynta
Shahaadada laba geesoodka cagaaran ee shaxanka guusha
Este diblooma lagu qurxiyay qaababka joomatari Midabada cagaaran waa ikhtiyaar xarrago leh oo casri ah oo hubaal kaa adkaan doonta. Naqshadeynta ayaa ah mid aad u kala duwan waxayna ku shaqeyn kartaa ku dhowaad xaalad kasta.
Isku darka madow iyo dahab waa mid aad u qurux badan oo la kala soocay. Bari shahaadada raaxada Waa ikhtiyaarka aad raadineyso haddii aad rabto diblooma casri ah, laakiin isla markaa waxay u gudbisaa dabeecad gaar ah oo gaar ah.
Shahaadada qadarinta ee saddexagalka cas
Kuwa kale shahaado casri ah oo xarrago leh, midabku wuxuu siinayaa muuqaal dhalinyaro iyo soojiidasho badan shahaadan qaddarinta leh ee saddexagalka casaanka ah.
Shahaadada guusha midab buuxa
Midab buluug iyo jaalle ah, midabada ugu weyn ee naqshaddan, waxay isku dhafan yihiin si dhammaystiran. Jaale, midab diiran, iyo buluug, midab qabow, si fiican ayuu isu guursadaa oo si dhammaystiran ayuu isu dhammaystiraa. Tan dhexdeeda shahaadada guusha midab buuxa Isku-dhafkan ayaa fure u ah abuurista naqshad casri ah oo la yaab leh.
Dibloomada oo leh qaab caadi ah
Haddii aad doorbideyso midab yar, kani waa shahaadada aad raadineyso. Bari diblooma oo leh qaab caadi ah Waxay leedahay naqshad yar, oo dooraneysa kaliya laba midab, mugdi iftiin leh, oo siinaya muuqaal aad loo safeeyey.
Midabada shaabad diblooma ee midabada leh
Haddii aad raadineyso shahaado carruurnimo oo dheeri ah, tusaalahan diploma caruurta leh naqshad aad u midab badan waad jeclaan doontaa. Waxay noqon doontaa mid waxtar badan haddii, tusaale ahaan, aad naftaada u hurto waxbarista oo aad rabto inaad siiso abaalmarin gaar ah ardaydaada.
Shahaadada lagu sharraxay qaababka buluugga ah iyo xargaha dahabiga ah
Diblooma aad u qurux badan, tan cshahaado lagu qurxiyay qaabab buluug ah iyo khadad dahab ah waxay soo bandhigaysaa xarrago iyo dhadhan fiican. Nooca sanduuqa sans-serif, oo leh cabbirro kala duwan, ayaa qaabkan u siinaya muuqaal casri ah.
Sawir gacmeedka asalka ilmaha
Kheyraad kale oo weyn oo wax lagu baro. Dibloomadan Waxay leedahay muuqaal aad u xiiso badan kuwa yaryarna waxaa hubaal ah inay jecel yihiin. Xulashada qoraalka ayaa ii muuqata mid aad u guuleysan sawiraduna waxay naqshaddan siineysaa taabasho hal abuur leh.
Mawduuc diblomaasiyadeed oo dhalaalaya
Este diblooma leh naqshad ku jirta codadka cagaaran iyo buluugga ah iyada oo ku saleysan qaabab qalooca, waa ikhtiyaar aad u fiican, faahfaahsan oo dhinacyo badan leh.
Soo koobida khadadka shahaadada
Naqshadeynta shahaadadan Waa mid cajiib ah oo hal abuur leh, iskudhafka qaababka ayaa siinaya dhaqdhaqaaq cayiman oo ka dhigaya ikhtiyaar aad uga duwan kuwii hore.
Shahaadada Dibloomada Kuleejka
Naqshaddani waa mid carruurnimo iyo madadaalo leh, sawirradu aad ayey ugu habboon yihiin a diblooma midabyaduna waa hubaal inay soo jiitaan dareenka kan ugu yar. Mabda'a badan oo midabbo badan Guul weyn ayaa laga gaadhay kiiskan!
Asalka buugaagta ay kujiraan diblooma iyo turubka
Xaaladdan oo kale waxaan kuu soo qaadanaynaa shaashad aan ugu hambalyeyno asxaabtaada, asxaabtaada iyo qoyskaaga qalin-jabintooda. The asalka buugaagta leh diblooma iyo turubka aad ayey ugu habboon tahay dhacdadan.
Dibloomada xarrago leh oo shaabadaysan
Isku darka dahabka, jaalle leh qaansada cas ee ka laadlaada xarfaha hore diplomaasigan ikhtiyaar xarrago leh oo casri ah.
Shahaado laba geesood ah oo casaan ah
Este shahaado naqshad geesinimo leh oo huruud iyo casaan ah Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan haddii aad raadineyso diblooma midab leh, mid casri ah iyo mid dhalinyaro ah.
Template shahaado qurxinta
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu xarrago badan ururintan, tan template shahaado qurxin Waxay naga guuleysatay xarrago iyo muuqaalkeedii caadiga ahaa.
Diblooma qurux badan oo leh faahfaahin qurxan
Naqshad kale oo ku jirta codadka dahabka ah, a diblooma xarrago leh oo lagu rakibayo faahfaahinta qurxinta, oo ku habboon in la gaarsiiyo munaasabadaha iyo munaasabadaha rasmiga ah.
Shahaadada leh qaabab joomatari buluug ah
Este shahaado leh qaabab joomatari Midabbada buluuga ah ee midabada kala duwan leh waa mid xarrago leh laakiin leh dabacsanaan badan iyo dhallinyarnimo.
Naqshadeynta shahaadada casriga ah oo leh qaabab joomatari casaan iyo madow ah
Haddii aad raadineyso a naqshad casri ah oo qaabab midab leh leh, iskudhafkan qaabab joomatari cas iyo madow ah ayaa ku sixri doona.
Dibloomada wanaagsan ee carruurta
Este diploma fiican ee caruurta ku raran yihiin sawirro hal abuur leh ayaa ah shay aad u wanaagsan, oo leh naqshad midab badan oo xiiso leh.
Dibloomada shaashadda oo leh xarfaha midabbo leh
Naqshad kale oo loogu talagalay kuwa yaryar, tan shaabad diblooma ah oo leh xarfaha midabbo leh Waa ikhtiyaar si isku mid ah u xiiso badan inkasta oo uu nadiifiye yahay, ka raran yahay. Xaaladdan oo kale, waxay doorteen inay isku daraan midabyo jilicsan oo siinaya shahaadadan taabasho ka duwan.
Wiil diblooma ah oo leh caruur qosol badan
Dibloomadan waa naqshad ku habboon oo gudbisa farxad iyo firfircoonaan. Qaabka jaallaha ah ee ku hareeraysan naqshaddu wuxuu siinayaa taabasho casri ah iyo isku-darka qaab-wareeg ah oo midabbo kala duwan leh ayaa ku daraya taabashada madadaalo ee shahaado loogu talagalay carruurta ay tahay inay lahaato.
Shahaadada qalin-jabinta oo leh saddex-xagal midab leh
Kani waa mid ka mid ah nashqadaha ugu jecel ururintaan, waa mid dhalinyaro ah waxaana loo isticmaali karaa carruurta iyo dhalinyarada labadaba. Isku darka qaababka joomatari iyo midabka midabka ayaa sameeya shahaadadan qalinjebinta ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo hal abuur leh iyo in barta naqshadeynta garaafka ah ee aadan jeclayn.
Shahaadada leh qaab dahab ah oo dahab ah
Este shahaadadu waa mid xarrago leh oo rasmi ahAstaamaha ugu caansan ee naqshadeynta ayaa ah qaabka dahabka ah ee qurxinta ee qaabeeya qoraalka oo lagu dhammeeyo dhalaal qurxin leh.
Template Shahaadada Cumppled
Tani template shahaado wuxuu raacayaa naqshad caadi ah iyo mid yar oo leh taabasho gaar ah, waa ikhtiyaar ikhtiyaari ah, oo ku habboon duruuf kasta, guul ama dhacdo kasta. Xarafka cas cas wuxuu ku darayaa taabashada midabka diblooma.
Diblooma qurux badan oo leh qaab qurxin
Xulashadaan caadiga ah ee midabka buluuga ah Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan, naqshadeynta ayaa ah mid aad isu dheellitiran iyo muuqaalka asalka ayaa siinaya taabasho ka duwan. Hadaad ubaahantahay shahaado munaasabad rasmi ah dibloomaadan qurxoon oo leh qaab qurxin waa waxaad raadineyso.
Shahaadada casriga ah
Isku-darka salmon ee buluuga ah ee loo yaqaan 'turquoise buluug' waa bambo, shahaadadan casriga ah Way kufiican tahay haddaad raadineyso diblooma, diblomaasiyadeed oo casri ah.
Shahaadada dibloomada guridda
Este shaabad diblooma ah guridda Waa ikhtiyaar kale oo aad u qurux badan oo xariif ah, asalka leh khadadka khiyaanada leh iyo ka soo horjeedka waxyaabaha mugdiga leh ayaa ka dhigaya naqshad xiiso leh
Dibloomada qurxinta ee mudnaanta leh qaabka caadiga ah
Este shahaadada mudnaanta leh qaabka caadiga ah wuxuu raacayaa naqshad toosan, fudud oo haddana aad u qurux badan, oo leh walxaha aasaasiga ah ee qurxinta si looga dhigo naqshad qurxan oo leh isku-dhafan qaab-dhismeed aad u fiican.
Halka laga sameeyo dibloomooyin bilaash ah
Hadaad rabto inaad sameyso dibloomaasiyadaada si bilaash ah, PowerPoint waa ikhtiyaar aad u wanaagsan. Barnaamijkan, oo loogu talagalay inta badan sameynta bandhigyada, wuxuu ku siinayaa qalab aad waxtar u leh si aad si fudud ugu abuurtaan naqshadahaaga.
Iyada oo leh qalab qaabab ah, oo laga heli karo tabka gelinta, waxaad ku dari kartaa waxyaabo garaaf ah oo naqshadeyntaada ka dhigi doonta mid soo jiidasho leh. Intaas waxaa sii dheer, waad ku habeyn kartaa iyaga qaabka "qaabka qaabka" iyo adigoo tagaya "wax ka beddel qodobbada" xulashada waxaad abuuri kartaa qaabab aan la taaban karin. Isku darista qaabab kala duwan, oo lagu ciyaarayo midab, cabirro iyo gooladaha waxaad abuuri kartaa dibloomooyin asal ah ama shahaadooyin ah. Xitaa waad ku dari kartaa jiisyo, si aad u siiso mugga halabuurka.
La ciyaar isku-darka qoraalka iyo kala sarreynta qoraalka
Fonteyadu waxay leeyihiin qiime aasaasi ah Naqshadeynta. Waxay kuxirantahay macnaha dibloomada, waxaad dooran kartaa xoogaa isku dhafan qaab qoraal ah ama kuwa kale. Haddii aad sameyn doontid diblooma aad ku bixinaysid dugsiga xanaanada, tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa xarfaha sans-serif gacanta lagu qoray, oo ku dar iyaga midabyo dhalaalaya oo faraxsan. Dhinaca kale, haddii ay tahay shahaado aad u daran oo xarrago leh, waxaad dooran kartaa inaad isku darto nooc ka mid ah nooca loo yaqaan 'serif typeface' oo ay ku jiraan sanduuqa sanbab-serif. Haddii aad ubaahantahay dhiirigelin si aad uhesho ikhtiyaarka ugufiican, markasta waad hubin kartaa qaar isku-darka qoraalka ee aan kuu soo bandhigeyno.
Waxa intaa dheer in fiiro gaar ah loo yeelo nooca qoraalka, waa muhiim inaad ku ciyaarto cabirka iyo dhumucda xarfaha in la sameeyo kala sarayn. Haddii aad guuleysato, shahaadadaada ayaa noqon doonta mid la aqrin karo oo haddaba muuqaal ahaan soo jiidasho badan.
Waad saxiixi kartaa adigoon barnaamijka ka bixin
Noocyadii ugu dambeeyay ee PowerPoinWaxaad haysaa tabta “isku aadka”. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u sameysid istaroog bilaash ah. Waxay bixisaa saddex nooc oo burush ah: qalin, qalin iyo iftiin. Qaabeynta dhammaantood waa la beddeli karaa sidaas waxaad astaysto dhumucda iyo midabka.
Qalabkani wuxuu noqon karaa faa iido u leh qurxinta shahaadadaada, gaar ahaan haddii aad sifiican u garaneyso sawirka, laakiin waxa ugu xiisaha badan waa taas mahadeeda waxaad awood u yeelan doontaa inaad saxeexdo diblooma adiga oo aan ka bixin barnaamijka. Waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad doorato qalin madow, oo leh dhibic ganaax ah, oo aad ku saxiixdo dukumentiga.Waad badbaadin doontaa waqti badan!
Sida loo sameeyo diblooma diplomaasiyadeed
PowerPoint maahan ikhtiyaarka kaliya ee lagu abuuri karo diblooma, waad sameyn kartaa diblooma dalxiisyo aan u baahnayn in la rakibo barnaamij kasta. Waa kuwan qaar ka mid ah qalabka waxtarka leh ee lagu abuurayo shahaadooyinka internetka. Waxa ugu fiican ayaa ah inay gabi ahaanba xor yihiin.
Canva waa aalad qaabeynta internetka ah iyo abuuritaan heer sare ah oo noocyo badan leh. Waxay bixisaa arrimo ku dhowaad wax kasta oo, dabcan, waxaad sidoo kale ka heli doontaa arrimo dhammaan noocyada shahaadooyinka. Ahaanshaha qalab bilaash ah waxaad dooran kartaa shaashadda aad rabto, wax ka beddeli karto oo aad ka beddeli karto adigoon ka bixin shabakada. Isticmaal mashiinka raadinta si aad u go'aamiso nooca shahaadada aad rabto oo aad hesho talo soo jeedin ka wanaagsan. Canva sidoo kale waxay leedahay nooc pro, inkasta oo kheyraadka nooca bilaashka ah aad haysato wax kabadan inta kugufilan, kaliya fiiro gaar ah ha u isticmaalin sheybaarada xaddidan oo u baahan lacag bixin.
Boggan waxaad ka heli doontaa moodooyinka kala duwan ee diblooma. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in lagu daro wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo PDF inaad daabacdo oo aad ku dhameystirto gacanta, waxay sidoo kale ku siinaysaa adiga Ikhtiyaar ah inaad iyaga si toos ah uga buuxiso shabakadda si aad u soo dejiso nooca ugu dambeeya.
In kasta oo websaydhka iyo sheybaaradu ku qoran yihiin Ingiriisi, gudaha 1,2,3 Shahaadooyin waad tafatiri kartaa qoraalka sheybaarada markaa tani dhibaato ma noqon doonto. Waxa aan ugu jeclahay degelkan si aan u sameeyo shahaadooyin dalxiis waa taa dibloomada ayaa 100% wax laga beddeli karaa: waxaad dooran kartaa midabada, cabbirka, jihada, qaab qorista iyo xitaa ku dar sawiradaada Waa bilaash waana fududahay in la isticmaalo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » 37 arrimo diblooma oo bilaash ah
Si fudud u soo uruurinta cajiibka ah!
Waqti kahor waxaan sameeyay mid lamid ah, laakiin koofiyadeyda waxaan uqaadaa tayada boostada, habka loo dalbado cinwaanada iyo uruurinta dibloomooyinka.
Waa xaasidnimo caafimaad leh haha ​​... Salaan kadib!
Salaan Esteban! Waxaan jeclahay inaad jeceshahay soo ururinta!
Waad ku mahadsan tahay, waxtarka aan caadiga ahayn ee dhagaystayaasha. Dibloomooyin aad u fiican iyo qaabab Shahaadooyin ah, ma helin mid ka fiican. Waxaan ku siinayaa 10 xiddigood iyo adduunyo dhammaystiran. Runtii aad baan u mahadcelinayaa.
Ku jawaab Mache
waa ururinta heer sare ah, dhammaystiran, toos ah oo aad ugu habboon. Aad baad u mahadsantahay. Dr Luis lopez
Ku jawaab Luis lópez Avalos
Shaqo qurux badan
Aad baad u mahadsantahay !! super lagu taliyay!
Jawaab Ricardo R
AAD AYA U XIISEYSAN YAHAY SHAQAALAHA SHAQAALAHA.
Ujawaab EDWIN QUISPECURO NINA
Waa salaaman tahay allaha ku barakeeyo fadlan waxaan ubaahanahay inaad igu hagto sidii aan u sameyn lahaa diblooma shax leh, oo aad leedahay taariikh cad oo ah bibl furan oo furan iyo inaan qori karo macluumaadka ay xambaarsan tahay dhibaato la'aan. MAHADSANID
Ku jawaab alexandra
Haye, waxaan hayaa su'aal la mid ah tii gabadha Alexandra ay i weydiisay, waxaan isku dayayaa inaan sameeyo wax la mid ah waana ku mahadsan kari waayey
Iyagu ma yihiin uun sawir? muxuu oranayaa bilaash? ma soo dejisan kartid oo ma isticmaali kartid.
Ku jawaab Heuresis